कुन कामलाई आवश्यक मानिन्छ? | गठन र अध्ययन
माइट निक्यूसा | 17/11/2021 23:44 | काम बन्द गर्नुहोस्
कुन कामलाई आवश्यक मानिन्छ? सबै कामहरू महत्त्वपूर्ण छन्, यसको अर्थ सबै पेशेवरहरूले बहुमूल्य काम गर्छन्। प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत काम कम्पनीको टोली परियोजनाको अंश हो। प्रत्येक व्यवसायले लक्षित दर्शकहरूलाई सम्बोधन गर्दछ जुन यसले यसको मार्केटिङ अभियानहरूमा जडान गर्दछ। तैपनि, यद्यपि सबै क्षेत्रहरू सान्दर्भिक छन्, त्यहाँ केहि कार्यहरू छन् जुन अझ बढी प्राथमिकतामा छन्। अर्थात्, तिनीहरू आवश्यक छन् किनभने तिनीहरू मानवको कल्याणसँग सम्बन्धित छन्।
महामारीको सन्दर्भमा अत्यावश्यक कार्यहरूको महत्त्व स्पष्ट भएको छ। आपतकालीन अवस्थामा प्राथमिकताहरूको क्रम परिवर्तन हुन्छ। यो त्यो क्षण हो जब आवश्यक कार्यहरूले ठूलो महत्त्व प्राप्त गर्दछ। त्यहाँ अन्य परियोजनाहरू छन्, अर्कोतर्फ, वास्तविकताको लयलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा परिवर्तन नगरी होल्डमा राख्न सकिन्छ।
1 मिडियासँग जोडिएका कामहरू
2 अन्त्येष्टि सेवा क्षेत्रमा जागिरहरू बनाइयो
3 स्वास्थ्य पेशेवरहरू
4 रसदको क्षेत्रमा काम गर्ने पेशेवरहरू
5 5. मानिसहरूको हेरचाह गर्ने पेशेवरहरू
मिडियासँग जोडिएका कामहरू
अनिश्चितताको अवधिमा पाठकहरूद्वारा जानकारीको खोजी बढ्छ। यस कारणले, मिडियाले समाजको लागि सन्दर्भ स्रोतको रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दछ। तिनीहरूले पूर्ण रूपमा प्रमाणित र दस्तावेज हालको डाटा प्रदान गर्दछ.
अन्त्येष्टि सेवा क्षेत्रमा जागिरहरू बनाइयो
जीवन जटिल परिस्थितिहरूमा आफ्नो मार्ग चल्छ। यी विशेषताहरूको अवधिमा एक शोक प्रक्रिया अनुभव गर्न सकिन्छ। एक मृतक प्रियजनको विदाई एक तथ्य हो जसले तिनीहरूको नजिकको वर्तमानमा एक मोड सिर्जना गर्दछ। अन्त्येष्टि सेवाहरूमा काम गर्ने पेशेवरहरूले आवश्यक कामहरू प्रदान गर्छन् समाजमा।
हामीले पहिले नै टिप्पणी गरिसकेका छौं, आवश्यक कामहरू ती हुन् जुन आधारभूत मानव आवश्यकताहरूसँग जोडिन्छन्। यसरी, कुनै पनि प्रकारको घटना भएमा, व्यक्तिले आफूलाई आवश्यक सेवामा सम्पर्क गर्न सक्छ। क्यालेन्डरको कुनै पनि अवधिमा स्वास्थ्य सेवालाई महत्व दिनु महत्त्वपूर्ण छ। रोगीले जाडो, शरद ऋतु, वसन्त र गर्मीमा कुनै पनि रोगको लक्षण अनुभव गर्न सक्छ। त्यसैले, पेशेवरहरु sanitarios उनीहरूले व्यावसायिक काम गर्छन्।
फार्मेसीहरू, उदाहरणका लागि, छिमेकहरूमा उनीहरूको उपस्थितिबाट स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई बढावा दिन्छ। तिनीहरू नजिकको वातावरणमा अवस्थित छिमेकीहरूका लागि बैठक बिन्दु हुन्। फार्मासिस्ट परिवारका लागि भरपर्दो विशेषज्ञ हो। सल्लाह र सम्भावित शंकाहरू समाधान गर्ने कोही।
रसदको क्षेत्रमा काम गर्ने पेशेवरहरू
ग्राहकहरू किनमेल कार्ट बनाउन प्रतिष्ठानमा यात्रा गर्दा खाना पसलले आवश्यक ध्यान दिन्छ। स्टोरको सेल्फमा फेला परेका उत्पादनहरूले पहिलेको प्रक्रियालाई पछ्याएको छ जसले सबै वस्तुहरूलाई बिक्रीको क्याटलगमा पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न सम्भव बनाएको छ। रसद क्षेत्रमा काम गर्ने पेशेवरहरूले समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन्।
5. मानिसहरूको हेरचाह गर्ने पेशेवरहरू
स्वास्थ्य सेवाको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण काम गर्ने पेशेवरहरू छन्। तिनीहरूले अन्य मानिसहरूलाई समर्थन र हेरचाह प्रस्ताव गर्छन्। उदाहरणका लागि, एक उन्नत उमेरले घरमा केही कार्यहरू गर्न विशेष सहयोगको माग गर्न सक्छ। यस क्षेत्रमा काम गर्ने पेशेवरहरूको संलग्नताले यो हेरचाह प्राप्त गर्नेहरूको जीवनको गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
आजको समाजमा अत्यावश्यक कार्यहरू गर्ने अन्य पेशेवरहरू छन्। उदाहरणका लागि, सुरक्षाको रक्षासँग जोडिएको काम गर्ने कामदारहरू। कुन कामलाई आवश्यक मानिन्छ? कैदको अवधिमा महामारीको ढाँचामा बस्नेहरूले समाजको साझा हित बढाउन आफ्नो सामान्य लयलाई पछ्याए।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » अध्ययन » काम बन्द गर्नुहोस् » कुन कामलाई आवश्यक मानिन्छ?
वकिल भनेको के हो?